Mareykanka oo soo Dhoweeyey Heshiiska DF iyo Ahlu Sunna – Goobjoog News
Mareykanka oo soo Dhoweeyey Heshiiska DF iyo Ahlu Sunna
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo dhoweysay heshiiska 20-ka xildhibaan ee ay gaareen dowladda federaalka ah iyo Ahlu sunna. Mareykanka ayaa qeyb weyn ka qaatay sidii heshiiska loo gaari lahaa.
Qoraal ay soo saartay safaaradda oo la soo gaarsiiyey Goobjoog News waxaa uu u qornaa:
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Amb. Donald Y. Yamamoto, wuxuu soo dhaweynayaa heshiiskii ay wada gaareen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ). Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an inay taageerto dadaalladan isla markaana ay hubiso hirgelintooda si Soomaaliya loo gaarsiiyo nabad iyo xasillooni.
Mareykanka wuxuu bogaadinayaa gorgortamayaasha howsha adag qabtay si loo gaaro heshiis loo wada dhan yahay kaas oo sugaya xasilloonida iyo barwaaqada dowlad-goboleedka Galmudug oo saf muhiim ah ooga jirto dadaalkeenna isku jirka ah ee lagula dagaallamayo al-Shabaab.
Waxaan aqoonsan nahay dadaallada dib-u-heshiisiinta ee ka jiro dalka oo dhan iyo sidoo kale tanaasulka adag ee ay sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorashada iyo qaybsiga wakiilnimada baarlamaanka, waxaanna dhiirigelineynaa hirgelinta heshiiska.
Galmudug waa gobol muhiim u ah horumarka mustaqbalka Soomaaliya, Safaaradda Mareykanka waxaa ka go’an fududeynta gargaarka bini’aadminimo, kaalmada amniga, iyo horumarka dhaqaale ee dadka reer Galmudug.
Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo shaacisay cinwaanada gobolada dalka
Machadka Tababarka Caafimaadka Soomaliya Ee Rajab Erdogan Oo Muqdisho Laga Furay
Baarlamaanka Oo Maanta Meel Mariyay Sharciga Shaqaalaha Ajaaniibta
International Crisis Group: Soomaaliya Kama Dhici Karto Doorasho Qof iyo Cod Ah ee Halagu Laabo Tii 2016
Plchlb ecofdh Buy cialis low price cialis india
Kdyoej ifojbl lowest price on generic viagra price of cialis
Lahdze fbwydy viagra online order cialis on line
Tthcmp kpfodq Sale cialis cvs pharmacy
Vtjwub vftlsj pharmacy online Jvsuk
Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed: Doorashada Waxaa Ay Dhaceysaa 19-ka December
order viagra online canada canada and viagra online porches...
cialis without prescriptions canada cialis black 800mg ciali...
generic cialis 200mg generic cialis no prescription paypal b...
anything cheaper than viagra cheap viagra uk buy viagra [url...
can i take cialis with daxpoteine buy cialis with paypal pay...